Ụzọ na-Jiri Google Play Music on iPhone, iPad, iPod
> Resource> tọghata> Olee otú Jiri Google Play Music on iPhone, iPad, iPod
Google Music mbụ e wepụtara azụ na 2011, na mgbe e mesịrị mwekota n'ime Play Music na Google Play (shortened dị ka Google Play Music) na 2012. Google Play Music-eme evolving na ya ọhụrụ gụgharia ọrụ Google Play Music All Access batara fruition a ọnwa ole na ole gara aga . Ka nchikota ihe Google Play Music nwere ike ime ugbu a.
1. Ọ-enye gị ohere bulite gị dum music n'ọbá akwụkwọ ya ígwé ojii maka playback na ihe ọ bụla na kọmputa na iri ngwaọrụ.
2. All Access awade a gụgharia ọrụ maka ruo 18 nde tracks na a kwa ọnwa ego nke $9.99.
3. Ọ bụ ikpo okwu maka music ịzụta.
Google Play Music bụ mbụ dị naanị na Web na Android. Gịnị banyere iOS n'elu ikpo okwu? Ozi ọma bụ na The ukara ngwa nke Google Play Music maka iOS e na nso nso oru. Ihe bụ ihe ọzọ, e nwere ihe ọzọ ụzọ abụọ na ị pụrụ ịnụ ụtọ iji Google Play Music on iOS. Otu bụ site Google Play web ọkpụkpọ maka iOS. Ndị ọzọ bụ maka ị na-akpa download music si Google Play Music na Google Play Music All Access na kọmputa gị na mgbe nyefee ndị music gị iPod, iPhone ma ọ bụ iPad. Ka tụnyere atọ ngwọta kwuru na ọ bụ ihe niile ị na-ahọrọ iji chọta onye na-arụ ọrụ gị.
Nwere họrọ otu ngwọta iji Google Play Music on iOS? Ka anyị hụ ihe-nkọwa nke ihe ngwọta n'okpuru.
# Ngwọta 1. Download music free na TunesGo, mee ka Google Music na Youtube Music dị ka gị ọbá akwụkwọ
# Ngwọta 2. Wondershare AllMyMusic
1. akpaghị aka download music si Google Play Music
3. Download dum Google music listi ọkpụkpọ ma kewaa ọ bụla 2 songs na-akpaghị aka
Olee otú iji Wondershare AllMyMusic ibudata music si Google Play Music na nyefe iDevices
Jiri a ngwọta, unu adịghị mkpa iche banyere data na emefu na ngwaọrụ gị na i nwere ike na-music faịlụ ruo mgbe ebighị ebi.
Nzọụkwụ 1. Download na Wụnye a music Downloader
Wụnye a usoro na gị Mac. Ọ bụ nnọọ iji wụnye omume na ị pụrụ ịgbaso ọkachamara ngwa ngwa wuchaa ya. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume iji nweta njikere.
Nzọụkwụ 2. Malite ibudata music si
Ị ga-ahụ a red Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe. Pịa bọtịnụ iji nweta njikere. Play All Access music na gị Mac. Dị ka ogologo oge dị ka e nwere ụda na gị Mac, a usoro ga-amalite idekọ ụda.
Mgbe music ebudatara, họrọ music na Library taabụ na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ na ala ịgbakwunye egwu niile na-iTunes. Mgbe ahụ ikwunye na gị iOS ngwaọrụ na mmekọrịta ebudatara music si iTunes.
# Ngwọta 3. Google Play Music ngwa n'ihi na iOS
Google Play Music ngwa n'ihi na iOS bụ ukara ngwa oru site Google. E mere ya n'ihi na ị na-achọpụta na, igwu egwu na-enwe music ị hụrụ n'anya. Na ndenye aha na-Google Play Music All Access, ị ga-enwe ike enuba 18 milliion tracks ka ogologo oge gị njikọ Ịntanetị available.You na mkpa iji wụnye ngwa a na ngwaọrụ gị, na mgbe ahụ amalite ka ọ na jikwaa gị music n'ọbá akwụkwọ mfe na -enwe music-amasị gị site na All Access ọrụ.
Wụnye Google Play Music maka iOS >>
# Ngwọta 4. Google Play web ọkpụkpọ maka iOS
Ị nwere ike ịnweta Google Play Music on iOS site na gị mobile nchọgharị. Ebe a bụ ndị dị mfe ndu.
Nzọụkwụ 1: y'otú mobile nchọgharị ma na-eleta play.google.com/music.
Nzọụkwụ 2: abanye n'ime gị Google akaụntụ. Ọ bụrụ na ọ dịghị, aha otu maka free.
Nzọụkwụ 3: Google Play Music ga-akpaghị aka mmekọrịta niile songs na akaụntụ ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 4: Ị nwere ike-egwu music ahụ n'ọbá akwụkwọ ugbu a. Ọ bụrụ na ị tụrụ ụtụ All Access, ị nwekwara ike enuba ruo 18 nde tracks.
Tụlee Solutions iji Google Play Music
Google Play Music ngwa n'ihi na iOS
Google Play web ọkpụkpọ maka iOS
Service Ụdị ngwa online ọrụ desktọọpụ software
Na-ege ntị music kpọmkwem site Google Play Music
Download na na-na music na ngwaọrụ
-Ejedebeghị na internet njikọ na ngwaọrụ
Jikwaa music na gị ngwaọrụ
1. ọma maka ijikwa music na ngwaọrụ
1. eme ka i nwee na-music faịlụ
2.-ekwe ka ị na-egwu music offline
1. ejedebeghị na internet njikọ
2. bụghị adaba iji